चर्चित गायिका मिलन नेवारले किन भनिन्न??? “दुनियाँले बाच्न दिदैन” भनेर (हेर्नुस् भिडियो सहित) – Puleso
चर्चित गायिका मिलन नेवारले किन भनिन्न??? “दुनियाँले बाच्न दिदैन” भनेर (हेर्नुस् भिडियो सहित)
हरिशजङ्ग क्षेत्री/काठमाडौ, गायिका मिलन अमत्यालले डिभोर्स पश्चात् पहिलो आधुनिक गित ‘दुनियाँले बाच्न दिदैन’ बोलको गितको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यो गितमा मिलनले आफ्नो अमत्याल थर फेर्दै नेवार समेत बनाएकी छिन् । गितबाट समेत गायिकाले आफ्नो ब्याक्तिगत जिवनको कुरा काटेर किन पीडा दिन्छन् भनेकी छिन । आनन्द अधिकारीले लेखेको गित गायिका मिलनको जिवन संग मिल्ने खालको र उनकै पिडालाई बयान गरेको छ । शिखर सन्तोषको कम्पोजमा मिलन नेवारको सुमधुर एवम् कर्णप्रिय आवाजले सजिएको गितको म्युजिक भिडियोलाई मुनाल शिशिरको निर्देशन, बिष्णु भण्डारी राजले सहाय निर्देशन गरेका हुन ।
गितको भिडियोलाई प्रबिन घिमिरेले छायांकन गरेका छन् । गितको म्युजिक भिडियोमा मोडल मेस्सी सिह ठकुरी, राज र सुरजको अभिनय रहेको छ । बर्तमान समयकी चर्चित गायिका मिलन नेवार अर्थात मिलन अमत्याल केहि समय अघि काठमाडौ जिल्ला अदालतमा आफ्नो श्रीमान संग सम्बन्ध विच्छेद गरेका कारण चर्चा र तनावमा रहेकी थिइन् ।
धेरैले उनलाई दिपक लिम्बू संगको अफेयरका कारण आफ्नो श्रीमानलाई डिभोर्स दिएको सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भएपछि मिलने यो मेरो ब्यक्तिगत मामिला भएकाले मलाई जे सहि लाग्छ त्यहीँ गरेको भन्दै आफ्नो फेसबुक मार्फत मार्मिक स्ट्याट्स पोष्ट गरेकी थिइन । साथै गायिका मिलन नेवार डिभोर्स पश्चात फेरि नेपाली गित संगीत र चलचित्रको पार्य संगीतमा जम्ने सुरमा छिन ।